Sida loo Iibiyo Magacyadaada Domain | Martech Zone
Sabtida, Diisambar 24, 2016 Arbacada, December 28, 2016 Douglas Karr
Haddii aad aniga oo kale tahay, waxaad sii wadaysaa inaad bixiso khidmadahaas diiwaangelinta magaca domain bil kasta laakiin waxaad la yaabban tahay inaad waligaa isticmaali doontid ama haddii qofna uu kula soo xiriiro si uu u iibsado. Waxaa jira dhibaatooyin dhowr ah taas, dabcan. Marka hore, maya… ma isticmaali doontid. Jooji naftaada kaftanka, waxay kaliya kuugu kacaysaa lacag aad u tiro badan sanad kasta iyada oo aan dib loogu soo celinaynin maalgashi kasta. Marka labaad, cidina ma oga inaad dhab ahaantii iibineyso - haddaba sidee ayaad u heli doontaa dalabyo?
Toban sano ka hor, geeddi-socodku wuxuu ahaa in la sameeyo indho-indheyn domain ah, la ogaado cidda iska leh, ka dibna la bilaabo qoob-ka-bixinta dalabyada iyo dalabyada diidmada ah. Mar alla markii aad isku raacdo qiimaha, markaa waa inaad bilowdaa koonto lagu wareejiyo. Taasi waa dhinac saddexaad oo haysta lacagta si loo hubiyo in cinwaanka si habboon loo wareejiyo. Waqtigaas, koontada escrow waxay u sii deyneysaa lacagta iibiyaha.
Aad ayey uga sahlan tahay hadda. Adeegsiga adeeg sida Wakiilada Domain, waxaad ku qori kartaa dhammaan boggagaaga adeegooda. Waxay qaataan qayb caafimaad oo iib ah, laakiin waxay dhexgalaan suuq la raadin karo, bog deg deg ah, iyo koontada loo yaqaan 'escrow account' oo dhammaantood ka hooseeya hal madal. Tani waxay fududeyneysaa in la helo oo la iibiyo boggaaga.
Maxaad sugeysaa Ku dar dhammaan kuwa aan la isticmaalin (iyo xitaa kuwa la isticmaalay) hadda:
Raadi ama Iibi Magacaaga Magacaaga
Sideed U Dejisaa Qiimaha Weydiimahaaga?
Muddo ayaan waxan waday taasna waa su'aal adag. Iibiyaha ayaa laga yaabaa inuu arko inay tahay shirkad ama iibsade maalqabeen ah oo iibsanaya oo kala gorgortamaya qiimo aad u badan oo wax iibsi ah. Ama iibiyaha ayaa laga yaabaa inuu nacas yahay oo u daa magac weyn oo magac leh wax uun. Waxaan iibsanay oo iibinay tanag magacyada domainka ah waligoodna waa xaalad walaac leh. Waxaa jira sharciyo fudud oo fudud sida domains gaagaaban oo aan lahayn jajab ama lambarro badanaa sameeya wax cajiib ah. Magacyada domain ee dhaadheer oo leh ereyo xarfaha qalad ah sidoo kale ma sameeyaan.
The TLD .com weli waa ka qiimo badan yahay tan iyo markii ay ahayd isku daygii ugu horreeyay ee ka mid ah raadinta ama biraawsarka si loo helo goob. Haddii domainku runtii lahaa nuxur oo uu kexeeyey natiijooyinka raadinta (iyada oo aan ahayn meel loogu talagalay malware ama sawir-gacmeed), xitaa waxay u qalantaa wax shirkad isku dayeysa in ay wado taraafikada dabiiciga ah ama maamulka astaanteeda.
Sharcigayaga suulka ayaa ah daacadnimada wadahadaladeena.Waxaan had iyo jeer kugula talin lahaa in iibsaduhu sameeyo dalabkiisa ugu horeeya si loo siiyo iibiyuhu falcelin deg deg ah oo ku saabsan in macaamilku uu qiimo leeyahay Iibsade ahaan, waxaa laga yaabaa inaan shaaca ka qaadno inaan ku iibsaneyno magaca qof saddexaad maxaa yeelay waxay rabaan inay bixiyaan qiimo macquul ah iyagoo aan bixin wax badan. Waxaan sidoo kale ogeysiineynaa iibiyuhu in aan jecelnahay inaan bixino waxa domainku qiimeeyo adoon ka kaxeynin iibiyaha. Dhamaadka gorgortanka, labada dhinacba inta badan way faraxsan yihiin.
Bakc ilaa Wakiilada Domain. Adoo cusbooneysiinaya DNS-keyga magaceyga, DomainAgents wuxuu dhigayaa bog degitaan oo aad u weyn si domainku u fududaado in la iibsado. Waa kuwan tusaale wanaagsan, ka hubi mid ka mid ah xayndaabyadayda - addressfix.com.
Waa kuwan meelihii kale ee aan iibka u dhignay, qaar waa kuwo fiican oo gaagaaban, qaar waa kuwo caan ah (iyo dalabyada ugu yar ayaa muhiim ah).
Shaacinta: Waxaan u adeegsaneynaa xiriiriyeyaasha xiriirka la leh Wakiilada Domain inta lagu gudajiro qoraalkan.
Tags: iibinta domaindeggenayaashameeqa ayuu ku fadhiyaa magacaaga domainsida loo qiimeeyo magac domainsida loo iibiyo magac domainiibin domainiibiya domainsTLD
Adeegyada Tech Computech
29, 2016 at 8: 56 PM
Qoraal aad u fiican oo talo weyn leh. Way ka qiimo jaban tahay daadinta meelahaas aan la isticmaalin halkii laga sii wadi lahaa bixinta khidmadaha sanadlaha ah ee soo noqnoqda iyo in ka badan.